जलविद्युत् विकास र स्वदेशी खुद्रा बजारको अपरिहार्यता - UrjaKhabar जलविद्युत् विकास र स्वदेशी खुद्रा बजारको अपरिहार्यता - UrjaKhabar
जलविद्युत् विकास र स्वदेशी खुद्रा बजारको अपरिहार्यता
काठमाडौं । केही हप्ता अगाडि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ३५औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा बोल्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले नेपालको विद्युत् क्षेत्रमा छिटै खुद्रा बिजुली बजार स्थापना गरी प्रतिस्पर्धाको ढोका खोलिदिने घोषणा गरे । अब हरेक नेपालीले इन्टरनेट, फोन, केबल टेलिभिजन या ग्यासको आपूर्तिकर्ता चयन गरे जस्तै बिजुली आपूर्तिकर्ता पनि छान्न सक्नेछन् ।
मन्त्री पुनका शब्दहरू ठ्याक्कै यी नभए पनि उहाँले पक्कै यही सोचेकोे हुनुपर्छ । किनभने, त्यस दिनको भाषणको तार्किक निष्कर्ष एउटै बिन्दुमा आएरमात्र टुंगिन सक्छ, नेपालको खुद्रा बिजुली बजारमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आरम्भ ।
“लगानी गर्नुस् भनेर लाइसेन्स दिएपछि (सरकारले) बिजुली किन्दिनँ भन्न मिल्दैन”
त्यस दिनको भाषणमा मन्त्री पुनले जलविद्युत् क्षेत्रमा ढुक्क भएर लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे । सरकारले विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने तर खरिद नगर्ने भन्ने हुनै सक्दैन भन्ने उनको धारणा थियो । लगानी सुरक्षा र उत्पादित बिजुली किन्न सरकार तयार रहेको आश्वासन पनि दिए ।
कुन सर्तमा सरकारले उत्पादित बिजुली किन्छ ? कस्तो किसिमको खरिद समझौता र सुरक्षा दिन्छ ? मन्त्रीले यी विवरणहरू दिएनन् । बिजुली किनिदिने प्रतिबद्धतामा कुनै सीमितता उल्लेख नगरेको हुँदा उत्पादि सबै बिजुली हालको मूल्य या फाइदाजनक रूपमा सरकारले किन्छ भनेर हामीले बुझनु पर्छ ।
“उत्पादित बिजुली देशभित्रै घरेलु बजारमा खपत नभए क्षेत्रीय बजारको व्यवस्था”
चुनौती यहीँबाट सुरु हुन्छ । हालसम्म प्राधिकरणले ७ हजार मेगावाटका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गरिसकेको छ । अर्को १० वर्षभित्र थप १० हजार मेगावाट निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । २१ हजार मेगावाटको अध्ययन अनुमितपत्र प्रदान गरिसकेको छ । अहिले नै उत्पादन घरेलु मागभन्दा बढी भइसकेको छ । आउने दिनमा सबै उत्पादन घरेलु बजारमा खपत हुने सम्भावना देखिँदैन । घरेलु माग र आपूर्तिबीचको बढ्दाे असन्तुलन प्राधिकरण र सरकारका लागि ठूलो चुनौतीको खडा भएको छ ।
यो चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सरकारले दुई किसिमको रणनीति अपनाएको देखिन्छ ।
१. घरेलु माग बढाउने ।
२. घरेलु बजारमा खपत हुन नसकेको अधिक आपूर्तिलाई क्षेत्रीय बिजुली बजारमा बेच्ने ।
‘बिजुली महसुल घटाएर, बिजुली चुलो (इन्डक्सन स्टोभ) बाँडेर र यस्ता अन्य नीतिले देशमा बिजुलीको माग बढाउँछु’ भन्नु इन्द्रेणी समातेर ल्याउछु भन्नु जस्तै हो । यस्ता नीतिहरू असफल साबित भइसकेका छन् । बिजुलीको माग आर्थिक विकास र बृद्धि दरसँग गासिएको हुन्छ । यो विषय अहिलेका लागि पन्छाउँ । यस्तो अवैज्ञानिक काल्पनिक नीतिका विषमा छुट्टै विश्लेषण आवश्यक पर्छ ।
क्षेत्रीय बजार भन्नाले भारत र त्यहाँबाट बंगलादेशको बिजुली बजार भनेर बुझ्नुपर्छ ।
भारतले आफ्नो घरेलु बिजुली बजार खुल्ला गरे पनि अन्तराष्ट्रिय लेनदेनका लागि खुल्ला गरेको छैन । सन् २०१८ मा भारतले जारी गरेको नीतिमा सरकारको भूमिकालाई प्राथमिकता दिएको छ । सरकारलाई अन्तरदेशीय बिजुली व्यापारको सर्त, मूल्य, मात्रा र समयावधि तोक्ने अधिकार दिइएको छ । सरकार–सरकार (जिटुजी) बीचका समझौता व्यापारिक सिद्धान्तको आधारमा बन्नु पर्दैन । यस्ता सम्झौतामाथि कसैले प्रश्न गर्न नपाइने भनिएको छ । सरकारबीचको सम्झौता निर्णयाक नै हुन्छन् ।
यस्तो संरचनालाई क्षेत्रीय ‘बजार’ भन्न मिल्दैन । यो त क्षेत्रीय सरकाहरूको राजनीतिक संगठन हो । सरकारहरूले चाहे भने एक अर्कासँग बिजुली व्यापार गर्छन् । चाहेन भने गर्दैनन् । यसमा बजारको केही सरोकार नै हुँदैन । यस्तो सरकारी लेनदेनमा कुनै पनि गैरसरकारी लगानीकर्ताले लगानी गर्दैन ।
सरकारहरूले अनेक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र ऐतिहासिक कारणले एकअर्काको देशमा लगानी गर्ने गर्छन् । नेपालको ऊर्जा विकासलाई परम्परागत, कुटनैतिक र भू–राजनीतिका सम्बन्ध होइन, असली खुल्ला बिजुली बजारको खाँचो छ ।
भारतले छिमेकी राष्ट्रहरूका लागि आफ्नो खुल्ला बिजुली बजारको ढोका खोले पनि यसबाट जलस्रोतको दिगो विकास गर्न नेपाललाई मुश्किल पर्छ । यसो हुँदा भारत केन्द्रित बजारको रणनीति बनाउनु प्राथना गरे सरह नै हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय बिजुली कारोबारमा एकीकरण
अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारलाई भारतको बिजुली बजारभित्र पूर्णरूपमा एकीकृत गरिएको छैन । गर्ने कुनै संकेत पनि छैन । उदाहरणका लागि, भारतभित्र पर्ने अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरू भारतको घरेलु विद्युत नीति–नियमभन्दा छुट्टै छ । भारतले पनि यसरी नै हेर्ने गरेको छ । यसले गर्दा त्यस्ता प्रसारण लाइनमा सरकारबाहेक अरू लगानीकर्ता या वित्तीय संस्थाले हात हाल्न चाहँदैनन् ।
त्यसैकारण, यस्ता प्रसारण लाइनहरूको निर्माण पूणरूपमा सरकारको विवेकी अधिकार (discretionary authority) मा निहित हुन्छ । सयौं उच्चस्तरीय बैठकहरू हुन्छन् । दुई वर्षमा बन्नुपर्ने लाइन ७ वर्षसम्म लाग्छ । सरकारको विवेकी अधिकारमा आधारित विकास यस्तै हो ।
हाल भारतको बिजुली बजारमा धेरै जस्तो व्यापार दलाली मोडलमा (brokerage model) हुने गर्छ । यसमा बिजुली व्यापारीले ग्राहक खोज्छ, आपूर्तिकर्ता खोज्छ । त्यसपछि एउटासँग बिक्री सम्झौता गर्छ, अर्कोसँग खरिद । यी दुई ग्राहक र आपूर्तिकर्ताबीचको लेनदेनबाट मुनाफा कमाउँछ । यसैकारण, भारतको केन्द्रीय विद्युत् नियमन आयोगले ट्रेडिङ मार्जिनमा माथिल्लो तोक (trading margin cap) लगाइदिएको छ ।
यस्तो बजारमा कुनै व्यापारीले पहिले नै बिजुली खरिद गरेर वा मागलाई आपूर्ति गर्ने ग्यारेन्टी लिएर बस्दैन । खरिद या बिक्रीमा तरलता लिएर बस्नु नै सही व्यापारिक रणनीति हुन्छ । त्यसैकारण, भारतको बिजुली बजारमा बढीजसो ग्राहक र आपूर्तिकता मिलाउने काम हुन्छ । यसैले पनि हुन सक्छ, भारतको बिजुली बजारमा अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा कम्पनीहरू सहभागी छैनन् ।
विद्युत् प्राधिकरणलाई भारतीय बजारमा अनौंठो रणनीतिमा उतरिँदै छ । ऊ भारतमा पहिलो व्यापारी हुन्छ जसले हजारौं मेगावाट खरिद गर्ने निश्चित गरेपछिमात्र बिक्री गर्न ग्राहकको खोजीमा हिँड्छ । यस्तो अनुचित व्यापारिक रणनीतिबाट भारतको बिजुली बजार प्राधिकरण, सरकार या नेपाली जनताका लागि लाभदायक नहुन सक्छ ।
अवशिष्ट क्षमताकाे बजार (residual capacity market)
भारतको बिजुली बजार अवशिष्ट क्षमताका लागि राम्रो निकास हो । पावर प्लान्टहरूले ग्राहकसँग दीर्घकालीन (लामो अवधि) बिजुली खरिद सम्झौता गरेपछि केही बढी उत्पादन बाँकी हुन सक्छ । सम्झौतापछि बाँकी भएको अधिक उत्पादन क्षमतालाई यस्ता अवशिष्टे बजारले निकास दिएर पावर प्लान्टलाई राम्रो सहयोग गर्न सक्छ ।
तर, यस्तो बजारले नयाँ निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनलाई लगानी जुटाउन सहयोग गर्दैन । भारतमै पनि नयाँ विद्युत् आयोजना व्यापारको आधारमा मात्रै बनेका छैनन् । सबै नयाँ आयोजनलाई दीर्घकालीन बिजुली खरिद सम्झौताको सुरक्षा चाहिन्छ ।
यस्तो अवशिष्ट क्षमताको बजार नेपालको हकमा उपयुक्त छैन ।
एक, भारतीय बिजुली वितरण संस्थानहरूले दीर्घकालीन खरिद सम्झौताका लागि गर्ने टे«डिङमा नेपालका जलविद्युत् व्यापारीले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँदैनन् ।
दुई, नेपालमा हालको घरेलु मागभन्दा अधिक भएको उत्पादन केही मात्रामा भारतको बिजुली बजारले निकास देला । छोटो अवधिका लागि माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउन केही सहज गरिदेला । तर, नेपाललाई दीर्घकालीन बिजुली खरिद सुरक्षा चाहिएको छ । यस्तो व्यवस्था गरेर नयाँ आयोजनमा लगानी जुटाउनु छ । भारतको अवशिष्ट विद्युत् क्षमताको बजारले नेपाललाई चाहिने दीर्घकालीन बिजुली खरिद सुरक्षा प्रदान गर्न सक्दैन ।
बिजुलीमा आधारित वित्तीय सम्झौताको व्यापार (electricity derivatives trading)
केही महिना अगाडि भारतले बिजुलीमा आधारीत वित्तीय सम्झौताको (इलेक्ट्रिसिटी डेरिभेटिभ) व्यापार सुरु गर्ने अनुमति दियो । त्यहाँको सर्वाेच्च अदालतले यस विषयमा हाल चलिरहेको मुद्दामाथि फैसला सुनाएपछि मात्र यो निर्णय कार्यान्वयन हुन सक्छ ।
डेरिभेटिभ व्यापारले लामो अवधिको बिजुली किनबेच सम्झौतालाई व्यवस्थापन गर्न सहज बनाइदिन्छ । भारतमा हाल करिब ९० प्रतिशत बिजुलीे किनबेच कारोबार यस्तै लामो अवधिको सम्झौताको माध्यमबाट हुने गर्छ । डेरिभेटिभको व्यापारले लामो अवधिको सम्झौतालाई नयाँ किसिमको लचकता र तरलता प्रदान गर्छ । जसले गर्दा यस्तो सम्झौताको प्रबन्ध गर्न सजिलो हुन्छ । भारतको घरेलु बजारमा डेरिभेटिभ व्यापारले ठूलो प्रभाव र आधुनिकीकरण गर्ने अनुमान छ ।
डेरिभेटिभको उपलब्धिले नेपालको जलविद्युत् विकासमा खास केही ठूलो प्रभाव पार्ने देखिँदैन ।
एक, डेरिभेटिभ व्यापार बिजुली लेनदेन हैन । यो वित्तीय पुँजीगत कारोबारको हो । भारतमै यो विषयको नीतिगत विवाद चलेको १० वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । अहिले यो विषय सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।
दुई, नेपाल र भारतीय पुँजीबजार व्यवस्थाबीच धेरै फराकिलो दूरी छ । यसो हुँदा यी दुई बजार गाँसिन अत्यन्तै मुश्किल देखिन्छ । नेपाल–भारतबीच यस्तो वित्तीय पुँजीगत सम्झौता बन्न त कहिले कहिले ।
अन्त्यमा, जताबाट हेरे पनि भारतको बिजुली बजारले नेपालको निर्यातलाई केही अवसर देला । छोटो अवधिका लागि माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन मिलाउन केही लचिलोपन प्रदान गर्ला । तर, भारतको बिजुली बजारले नेपालमा निर्माण भइरहेका वा निर्माणमा जाने तयारीका जलविद्युत् आयोजनालाई दीर्घकालीन खरिद या आम्दानीको सुरक्षा दिन सक्दैन ।
प्राधिकरण या सरकारले भारतीय बजारको आधारमा नेपालमा ‘उत्पादित सबै बिजुली किनिदिन्छु’ भनेर सम्झौता गरे पनि त्यसले नयाँ आयोजनामा व्यावसायिक लगानी जुटाउन सकिँदैन । व्यावसायिकरूपमा कसैले त्यो सम्झौताको कदर गर्दैन । लगानीकर्ताले त्यो जोखिम उठाउन मान्दैनन् ।
नेपालको जलविद्युत् विकासका लागि फाइदाजनक अस्त, खरिद मूल्य र सुरक्षित दीर्घकालीन बिजुली खरिद सम्झौता जरुरी छ । यो भारतको बजारले दिन सक्दैन । नेपालको घरेलु माग पर्याप्त छैन भने विकल्प के ?
“जोखिम मोल्न तयार रहनु र आत्मनुशासित बन्नु”
अब एकमात्र विकल्प छ । जसले अवसर देखेर जोखिम उठाउन सक्छ, त्यसलाई अवसर दिनुपर्छ । सरकारले नेपालको घरेलु खुद्रा बिजुली बजार स्थापना गरेर जोखिम उठाउन सक्नेहरूलाई मैदान खाली गरिदिनुपर्छ ।
नेपालमा खुद्रा बिजुली बजारको प्रतिस्पर्धा खोलीदियो भने के हुन्छ ?
एक, बिजुलीको माग बढ्छ भन्ने सोच राख्ने या बढाउन जुक्ति जान्ने व्यवसायीले त्यही अनुसार थोक बिजुली बजारबाट बिजुली किनेर खुद्रामा बेच्छन् ।
दुई, प्राधिकरणले यसमा बजार व्यवस्थापन र विद्युत अपरेटरको भुमिका निर्वाह गर्छ ।
तीन, नयाँ जलविद्युत आयोजनहरूले मागको अनुमान आफैं लगाउँछन् । जोखिमको तुलना आफैं गर्छन् र लगानी गर्न सकिने÷नसकिने निर्णय आफैं गर्छन् ।
नेपालमा बिजुलीको माग छ÷छैन ? भारतले किन्छ÷किन्दैन ? प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्छ÷गर्दैन ? यी प्रश्नहरू अध्ययन, छलफल या कुनै राजनीतिक बहसबाट टुंगो लाग्ने विषय होइनन् । यसलाई मात्र खुल्ला खुद्रा बिजुली बजारले टुंगो लगाउन सक्छ । जसले बिजुलीको माग देख्छ, बेच्न सक्छु भन्छ उसले उत्पादनमा अवसरको अड्कल गर्न सक्छ । ज्ञान, क्षमता र नयाँ सोच हासिल गर्छ । जसको आत्मविश्वास छ उसले खुद्रा बजारमा भाग लिन्छ । अरू सबै भाग्छन् ।
माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन मिलाउनु कुनै नौलो कुरा होइन । यो धेरै देशहरूले भोगिसकेको पुरानो समस्या हो । कुनै जमानामा बिजुली माग नपुगेर ग्राहकलाई रातभर बत्ति बालीराख्न पैसा दिएको उदाहरणका देश पनि छन् । यो चुनौती सामना गर्न अनेक कानुन र व्यवहारबाट सिक्दै आएर विश्वका धेरै बिजुली बजारहरू एउटै निष्कर्षमा पुगेका छन् । खुद्रा बिजुली बजारलाई प्रतिस्पर्धाका लागि खोलीदियो भने समस्या आफैं हराएर जान्छ ।
भारतको बिजुली बजारको आश गरेर बस्नु आशैमात्र हो । हैन, ‘जोखिम’ मोलेर र ‘आत्मानुशासनका’ साथ जलविद्युत् विकास गर्ने हो भने आफ्नै घरेलु खुद्रा बिजुली बजार खोल्नुको विकल्प छैन ।